September, 2021 - Sports myanamr - Page 2
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲက Rating နဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်များ
September 23, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ ဖလား ၁ လုံးတော့ စောစော စီးစီး လက်လွှတ် လိုက်ရပါပြီ ။ တနင်္ဂနွေ တုန်းက အဝေးကွင်းမျာ အနိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ကို ၃ ရက် အကြာမှာတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ယူနိုက်တက် တို့ လက်မြှောက် အရှုံးပေးခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အရင် …
ချိုတလှည့် ခါးတလှည့် ဆိုးရှား ၊ ဂိုးမိုးရွာပြီး တားမရတဲ့ ရီးရဲ ၊ ဟာခီမီ ကယ်တင်တဲ့ PSG တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ တနင်္ဂနွေ တုန်းက အနိုင် ကစား ခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိုက်တက် ကိုအိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံ ကစား ခဲ့ပြီး ၁-၀ နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲ …
အရန် အချို့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ပွဲထွက်စာရင်းကို ဘာကြောင့် တိုးမပေါက်လဲ ဆိုတာ ပြသခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၁ – ၁ ဗီလာ ( Pen ၄ – ၃ ) ပွဲမှ ခြင်္သေ့ပြာတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )
September 23, 2021 September 23, 2021 - by Editor
မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ် တပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ ရက်ကမှ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း ကို အိမ်ကွင်းမှာ သာမန် ပွဲချိန် အတွင်း တဖက် တဂိုးစီ သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့လို့ ၊ …
EPL / Laliga / News / Serie A
September 22, 2021 - by Editor
အဲဗာတန် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဟာမက်စ် ရိုဒီဂွက် ဟာ ကာတာ ကလပ် အယ်လ် ရေယန် အသင်း ထံ အငှား နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချန်ပီယံရှစ် ကလပ် ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်းကတော့ အသင်းကို အောက်ခြေကနေ ပြန်လည် တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် Administration ဝင်လိုက်ပြီ …
ဒီကနေ့ မွေးနေ့ရှင် ရိုနယ်ဒိုကြီး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိသလဲ ?
ဒီကနေ့ ကတော့ ဘောလုံး အကျော်အမော်ကြီး ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ၄၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒိုကြီး ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် မှာ ဘောလုံး လောက ကို သူ့ရဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ လှည့်ကွက်တွေ ၊ ပြောင်မြောက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ၊ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ မိတ်ဆက် …
မက်ဆီ ကို ဘာပေ ၊ နေမာ တို့ နဲ့ တန်းတူမဆက်ဆံဘူးလို့ ပိုချက်တီနို ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ PSG ကစားသမားဟောင်း
ပြင်သစ် ထိပ်သီး ကလပ် PSG ရဲက တောင်ပံ ကစားသမားဟောင်း ဂျရုမ်း ရိုသန် က လက်ရှိ PSG နည်းပြ မော်ရီစီယို ပိုချက်တီနို ကို လီယွန်နယ် မက်ဆီ ကို လူစားလဲခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဟာ လိုင်ယွန် …
ရိုနယ်ဒို ဦးဆောင်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား ၁၀ ယောက်
ဘောလုံး သမား တယောက် အတွက် မြင့်မားတဲ့ လုပ်ခ လစာဟာ အရေးကြီး ပါတယ် ။ ဘာလိ့ုလည်း ဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေ ဟာ ဆယ်စုနှစ် ၁ ခု စာလောက်ပဲ ကြာရှည်တာ ကြောင့်ပါ ။ ဘောလုံးသမား အများစု ဟာ ၃၂ ၊ ၃၃ …
မနေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ် တွေမှာတော့ မန်ချက်စတာ စီးတီး ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဝိုင်ကွမ်ဘီ အသင်းကို ၆-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ဂွာဒီယိုလာ ဟာ ဒီပွဲမှာ ဂိုးသမား အီဒါဆင် အပါအဝင် ခံစစ် …
ကာရာဘောင် ပွဲမှာ လင်ဂတ် နည်းတူ ပွဲထွက်ခွင့် သေချာသွားတဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားများ
September 21, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ဟာ မနက်ဖြန် ညမှာ ကစားမယ့် ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းနဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား စတုတ္ထ အဆင့် ပွဲစဉ် မှာ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ပါဝင် ကစားမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ကတည်းက အတည်ပြု ပြောဆို ခဲ့ပြီး …
EPL / Laliga / Ligue / News / Serie A
ဘာစီလိုနာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဟာ လက်ရှိ နည်းပြ ရော်နယ် ကိုးမန်း အပေါ် စိတ်ရှည် သည်းခံမှုတွေ ကုန်ဆုံးလု နီးပါး ရှိနေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ လာမယ့် ပွဲစဉ် ၃ ပွဲ မှာ ကိုးမန်း ကို စောင့်ကြည့် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာ ခဲ့ပါက ထုတ်ပယ် …